ယုနျလေးကို ဘာကွောငျ့ ဝိုငျးသမနကွေတာလဲလို. မေးခှနျးထုတျလိုကျတဲ့ လကျဝှေ.ကြျော ဒဗျေ့ – Myanmar
ဒီကနေ့ လူမှုကှနျယကျမှာဲ့ဆူနတေဲ့ သတငျးတဈပုဒျကတောာ့ လကျဝှကြေ့ျော ဒဗျေ့ ချေါ ဒဝေ တဈယောကျ သူ့ရဲ. ဖစျေ့ဘုချမှာ ရေးသားထားတဲ့ အကွောငျးအရာကွောငျ့ပါ ၊ လကျဝှသေ့မား ဒဗျေ့က သူ့ရဲ.ဖစျေ့ဘုချမှာ အောကျပါအတိုငျး ရေးသားထားခဲ့တာပါ ။
“လူတှကေ ဘာလို့ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြး Yone Lay ကို ဝိုငျးသမနကွေတာလဲဗြာ။ မနှဈက ယုနျလေးက ၂၀၂၁ မှာထှကျမယျ့ သူရဲ့ အကျရှငျကား (Underground) မှာ ပါဖို့ ကြှနျတေျာ့ကို ဖိတျခဲ့တယျ။ ယုနျလေးက အရမျးကွငျနာယဉျကြေးပွီး ရကျရောတဲ့သူတဈယောကျပါ။ ကြှနျတျောနဲ့ ကြှနျတေျာ့အမြိုးသမီးကိုဆိုရငျ ဘုရငျနဲ့ဘုရငျလိုပဲ ဆကျဆံတာ။သူနဲ့ပတျသကျပွီး ကြှနျတျော အမှတျမိဆုံးက တဈနေ့ ကတြော့ ကြှနျတျောတို့ မနကျတဈနာရီအထိရုပျရှငျရိုကျပွီးလို့ ပငျပနျးနတေဲ့အခြိနျမှာ မနကျငါးနာရီကွီး ကြှနျတျောဆီ ဖုနျးဆကျလာတယျ။ အိမျခွယောမဲ့လူတှကေို အစားအသောကျ၊အဝတျအစားနဲ့ လကျဆောငျတှသှေားပေးဖို့ လိုကျခငျြရငျ လိုကျခဲ့တဲ့။အလုပျတနျးလနျးကွီးနဲ့ သူဘယျလိုတကျကွှလနျးဆနျးပွီး လူ့အဖှဲ့အစညျးကို ကူညီဖို့အားတှေ ဘယျလိုရှိနလေဲမသိဘူး။ ကြှနျတျောလညျး ပငျပနျးနတောနဲ့ မလိုကျဖွဈပမေယျ့ သူ့ဖာသာ သှားတယျဗြာ။ အဲ့လို နှလုံးသားနဲ့ လူကွီးကို ကြှနျတျော တကယျလေးစားပါတယျ။Dave Leduc
သူ့ရဲ. ရေးသားမှုကွောငျ့ လူတှကေ မွနျမာနိုငျငံက အကွောငျးတှကေို နားမလညျပဲ ဝငျမပွောသငျ့ကွောငျး ပွောဆိုနပေါတယျ။ အခြို.ကလညျး အခုလို ပွောဆိုတာဟာ မွနျမာပရိသတျတှကေို ဆုံးရှုံးနိုငျကွောငျးလညျး သတိပေးထားပါတယျ။
ယုန်လေးကို ဘာကြောင့် ဝိုင်းသမနေကြတာလဲလို. မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ လက်ဝှေ.ကျော် ဒေ့ဗ်
ဒီကနေ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ့ွဲဆူနေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတောာ့ လက်ဝှေ့ကျော် ဒေ့ဗ် ခေါ် ဒေ၀ တစ်ယောက် သူ့ရဲ. ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ ရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းအရာကြောင့်ပါ ၊ လက်ဝှေ့သမား ဒေ့ဗ်က သူ့ရဲ.ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားခဲ့တာပါ ။
“လူတွေက ဘာလို့ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Yone Lay ကို ဝိုင်းသမနေကြတာလဲဗျာ။ မနှစ်က ယုန်လေးက ၂၀၂၁ မှာထွက်မယ့် သူရဲ့ အက်ရှင်ကား (Underground) မှာ ပါဖို့ ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်ခဲ့တယ်။ ယုန်လေးက အရမ်းကြင်နာယဉ်ကျေးပြီး ရက်ရောတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးကိုဆိုရင် ဘုရင်နဲ့ဘုရင်လိုပဲ ဆက်ဆံတာ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် အမှတ်မိဆုံးက တစ်နေ့ ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ မနက်တစ်နာရီအထိရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးလို့ ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာ မနက်ငါးနာရီကြီး ကျွန်တော်ဆီ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အိမ်ခြေယာမဲ့လူတွေကို အစားအသောက်၊အဝတ်အစားနဲ့ လက်ဆောင်တွေသွားပေးဖို့ လိုက်ချင်ရင် လိုက်ခဲ့တဲ့။အလုပ်တန်းလန်းကြီးနဲ့ သူဘယ်လိုတက်ကြွလန်းဆန်းပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကူညီဖို့အားတွေ ဘယ်လိုရှိနေလဲမသိဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ပင်ပန်းနေတာနဲ့ မလိုက်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ဖာသာ သွားတယ်ဗျာ။ အဲ့လို နှလုံးသားနဲ့ လူကြီးကို ကျွန်တော် တကယ်လေးစားပါတယ်။Dave Leduc
သူ့ရဲ. ရေးသားမှုကြောင့် လူတွေက မြန်မာနိုင်ငံက အကြောင်းတွေကို နားမလည်ပဲ ၀င်မပြောသင့်ကြောင်း ပြောဆိုနေပါတယ်။ အချို.ကလည်း အခုလို ပြောဆိုတာဟာ မြန်မာပရိသတ်တွေကို ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းလည်း သတိပေးထားပါတယ်။